Home Wararka Sawiro:Side Muqdisho Xalay looga xusay 1-da Luulyo?
Sawiro:Side Muqdisho Xalay looga xusay 1-da Luulyo?
Magaalada Muqdisho ayaa xalay looga dabaal dagay xuska Sanadguurada 58-aad ee ka soo wareegay markii gobolada Koonfur 01 July 1960-Kii, ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga, Islamarkaana ku asteysan Israacii Labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur.
Munaasibadda oo ka dhacday Aqalka dowladda Hoose ee Xamar, ayaa waxaa ka qeyb galay, Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre , Wafdi ka socda dowladda Jabuuti, xubno ka tirsan Labada Gole ee dowladda, Saraakiisha Ciidamada Qalabka Sida, Gudoomiyaha gobolka, Gudoomiyeyaasha degmooyinkaiyo ururada Bulshada.
Munaasibadda waxaa Qudbado ku saabsan taariikhda iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray Xorriyadda Soomaaliya waxaa ka jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah Waayo joogga Soomaaliyeed.
Previous articleShirka Midowga Afrika oo Maanta ka furmaya Nouakchott
Next articleGaas”Shacabka Soomaaaliyeed waa midoobi doonan”
Barnaamij lagu xayeysinayay Md Farmaajo Oo Youtopka laga saaaray+Rw Khayre Oo...